Demaokrasia momba ny alikaola: Ny politika miafina | safidy
Demaokrasia amin'ny alikaola
ny Veronika Janyrova 30. Desambra 2015, 12: 01 9.5k Views
Iza no tsy mahalala, ny tsy fahatokisana no miseho rehefa mpanao politika mampiseho ny zava-kanto lazaina hoe tsy misy dikany? Na raha ny fanapaha-kevitra politika indray mandeha mazava tsara eo amin'ny resaka tombontsoa manokana? Na dia mitaky hetsika aza ny sary demokratika misy antsika, afa-po isika amin'ny farany satria voafetra ny fotoana sy ny tsy fisian'ny fotoana demaokratika mivantana hisintonana ny mpanao politika handresy ny kakao. Nefa tsy maintsy ho toy izany ve? Moa ve izany no teny farany an'ny demokrasia? Araka ny foto-kevitry ny demaokrasia Liquid dia mazava ny valiny: tsia.
Tao anatin'ny taona 2011 sy 2012 dia nanao ny antoko piraty Alemana niaraka tamin'ny foto-kevitra furore ary avy eo dia nanao ny fidirana ho amin'ny parlemantera efatra. Na dia tsy nifandimby aza ny fahombiazan'ny fifidianana politika dia efa nasehon'izy ireo an'izao tontolo izao ny fomba fiasan'ny Liquid Demokrasia ho toy ny antokon-draharaha mikarakara antoko anatiny.
Noho izany dia nampiasa ny rindrambaiko malalaka loharanon'ny loharano Liquid Feedback. Izy io dia sehatra fampiasam-bola ahafahan'ny olona maro mandray anjara amin'ny asan'ny antoko ary hamorona ny heviny. Amin'izao fotoana izao, ny lohahevitra 3.650 sy ny hetsika 6.650 dia dinihina sy lanin'ny mpikambana 10.000. Ireo soso-kevitra, hevitra na ahiahy manorina rehetra dia aseho mangarahara ary amboarina haingana kokoa. Amin'izany fomba izany, ny antoko Pirate any Aotrisy, ohatra, miaraka amin'ireo mpikambana 337 ankehitriny dia afaka namorona fandaharan'asa feno fatratra izay tsy lavitra ny fandraisana anjara sivika sy ny politika ara-tambajotra.
Saingy ny demokrasia Liquid dia tsy rindrambaiko fotsiny na fanandramana fizahan-tany. Ao ambadiky ny Demaokrasia Liquid dia ny modely demokrasia-politika amin'ny parlemantera mivantana. Mikatsaka ny hanambatra ny tombony ho an'ny rafitra parlemantera miaraka amin'ny mety hisian'ny demaokrasia mivantana, ka ahafahana mivoaka ny lesoka amin'ireo rafitra roa ireo. Raha ny tokony ho izy dia momba ny fahalemen'ny rafitra demaokratika voaorina izay ny adihevitra ara-politika amin'ny lahatsoratra ara-dalàna izay tsy hanaovan'ny mpanolotsaina sy ny solontena tompon'andraikitra. Ao anatin'ilay rafitra solontenany dia natokana ho an'ny vondrona politika, komity ary parlemantera koa handray anjara amin'ny kabary politika. Amin'ny lafiny parlemantera mivantana, amin'ny lafiny iray, ny olom-pirenena mihitsy no manapa-kevitra hoe inona no lohahevitra ary oviana izy ireo te handray anjara mavitrika amin'ny resaka iray. Ny lahateny ara-politika dia hita fa fepetra takian'ny fanapaha-kevitra ara-dalàna.
INFO: Demaokrasia misotro toaka
Izany no fiasan'ny demokrasia Liquid
Ny Demaokrasia ny alikaola dia elanelana misy eo amin'ny solontena sy demokrasia mivantana, izay ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny lahateny ara-politika amin'ny Internet amin'ny fotoana rehetra sy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny lahatsoratra ara-dalàna - raha mifidy izy. Tsy ny olom-pirenena ihany no manome ny vatony isaky ny efatra ka hatramin'ny dimy taona, fa mitazona izany "tsy misosa tsara", izany no tokony hitenenana, amin'ny alàlan'ny fanapahankevitra mandinika izay raharaha tadiaviny hifidy ho an'ny tenany sy izay hanaterany azy ireo amin'ny olona iray (na mpanao politika). nanome ny fitokisany. Raha ny fomba fanao, ity no mety, ohatra, momba ny raharaha momba ny hetra amin'ny alàlan'ny antoko X maniry ny hisolo tena azy, amin'ireo olana ara-tontolo iainan'ny fikambanana Y sy ny olan'ny politikam-pianakaviana Z. momba ny fanavaozana sekoly, fa te hanapa-kevitra ianao. Ny solontenan'ilay latsa-bato dia mazava ho azy, miverina amin'ny fotoana rehetra, hiantohana ny fanaraha-maso mahomby ny rafitra politika.
Ho an'ireo delegasiona, io hevitra io dia manome fomba ahafahana mamantatra ny heviny sy ny toe-piainan'ny fototra ary hampiroborobo ny tetikasan'izy ireo hanohanana sy vato. Ho an'ny olom-pirenena, azo atao ny mandray anjara ara-politika sy manampy amin'ny famolavolana hevitra politika sy fandraisana fanapahan-kevitra na fahalalana tsotra fotsiny.
Jiro demokrasia maivana
Ny fikambanana alemà Fikambanan'ny Public Software Group e. V., ilay namolavola ny feedback momba ny alikaola ary ny Interactive demokrasia eV, izay manohana ny fampiasana ny media elektronika amin'ny demaokrasia, dia mahita ny tena zava-misy amin'ny fandraisana anjara bebe kokoa amin'ny fanavaozana fototra amin'ny fanapahankevitra eo amin'ireo antoko.
Axel Kistner, mpikambana ao amin'ny biraon'ny fikambanana Interactive Democracy eV dia manamafy: "Ny hevitra tany am-boalohany dia ny hampiasana valin-kafatra amin'ny rano ao anatin'ireo antoko, satria ny rafitry ny antoko anatiny manelingelina dia manome ny mpikambana ao aminy na tsia tombontsoa hidirana". Ny fampiasana ho fitaovana demokratika mivantana dia tsy natao velively.
Ohatra iray tena malaza sy resahina ao amin'ny Demaokrasia alikaola natolotry ny distrika Aleman'i Friesland. Nanomboka ny tetik'asa Liquid Friesland roa taona lasa izay, nampahafantarany ny alika fampidiran-dra Hatreto, ny olom-pirenena ao amin'ny 76 sy ny mpitantana ny distrika 14 dia namoaka hetsika teo amin'ny lampihazo. Ireo fandraisana an-tanana ataon'ireo olom-pirenena ireo izay mahazo ny vatany ao amin'ny Liquid Friesland, na izany aza, dia ny serivisy any amin'ny distrika ihany no manome ny andraikitra ao amin'ny distrika fa tsy fatorana ho azy ireo. Na izany aza, ny takelaka momba ny fandanjalanjana ankehitriny dia tena mahavariana: amin'ny fandraisana andraikitra 44 ho an'ny olom-pirenena, izay efa notsaboina tao amin'ny filankevitra distrika, ny 23 isan-jato no nolanina, nolanja ny 20 isan-jato tamin'ny endrika miova ary ny 23 isan-jato no nolavina. Betsaka ny 20 isan-jatony no efa nampiharina, ary ny 14 isan-jato dia tsy tompon'andraikitra akory ny mpitantana ny distrika.
Na izany aza, i Friesland dia tsy hijanona ho hany manam-pahefana alemà izay sahy manao ny dingana mankany amin'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena nomerika: "Tanàna roa hafa - Wunstorf sy Seelze - ary distrika iray hafa - Rotenburg / Wümme - tsy ho ela dia hamoaka ny fandraisan'anjara olom-pirenena ary hampiasa ny LiquidFeedback". ka i Kistner.
Hifidy ny Demaokrasia Liquid ve isika amin'ny hoavy?
Na inona na inona herin'ny aingam-panahy izay mety hielezan'ny hevitra momba ny Demaokrasia, dia mety hitoetra ho an'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ihany koa ny fampiasana azy, ary koa ny fandraisana an-tsoratry ny antoko sy ny fandraisana fanapahan-kevitra. Amin'ny lafiny iray dia mbola maro ny fanontaniana tsy voavaha ho an'ny fampiharana ny politika demaokrasia .. Amin'ny lafiny iray, toa ny olona maro an'isa dia toa tsy voakitika loatra momba ny hevitra hoe tafiditra amin'ny resaka politika na koa ny fifidianana amin'ny Internet.
Ny olana tsy voavaha dia ny fihazonana fifidianana miafina sy ny risika miaro amin'ny fiarovana sy ny fanodikodinanana. Amin'ny lafiny iray, azo antoka ny tsiambaratelo, saingy mbola tsy takatra ny «boaty biletà tokana» izay azo antoka hiantohana ny maha-mpifidy sy hanamarina ny maha-làlana azy ireo, raha toa kosa ka manapa-kevitra tsy hitonona anarana ary hanao an-keriny izany fomba izany. Na dia azo atao ara-teknika aza izany amin'ny alàlan'ny fampisehoana karatra maha olom-pirenena sy fandaharana amin'ny alàlan'ny paikady loharanom-baovao misokatra, mbola misy ihany ny loza tsy azo lavina amin'ny fanaingoana ary ny traceability dia mety ho natokana ho an'ny vondrona vitsy an'isa mpampiasa IT ihany. Ankoatr'izay, ny fifidianana miafina dia mifanipaka mazava amin'ny fangaraharana doka amin'ny demokrasia mivantana ihany koa .. Ny mpamolavola momba ny alikaola amin'ny alikaola dia noho ny 2012 dia nanalavitra ny tenany amin'ny fampiasany ny rindrambaiko ao amin'ny antoko Pirate.
Ny olana hafa dia ny fanontaniana hoe tokony ho fatorana na soso-kevitra fotsiny ihany ny valin'ny fifidianana. Tamin'ny tranga teo aloha dia tsy maintsy manamarina izy ireo amin'ny fanakianana fa aleony ny olona manana fahaiza-manao Aterineto lehibe kokoa sy fampifanarahana amin'ny fizotran-kevitra ara-politika, diso ny valin'ny resadresaka an-tserasera ho toy ny salan'isa momba ny solontena. Amin'ity tranga farany ity, raha tsy mamatotra ny valim-pifidianana, very fotsiny ny potika demokratika mivantana an'io hevitra io.
Ny teboka iray hafa voatsikera matetika dia ny tsy fahampian'ny fandraisana anjara vita miaraka amin'ny fitaovana mivantana-demokratika amin'ny ankapobeny. Raha ny tetikasa mahomby Liquid Friesland mahomby dia eo ho eo amin'ny 0,4 isan-jaton'ny mponina ny tsato-kazo. Raha ampitahaina, ny fandraisana anjara amin'ny fanangonan-tsonia mba hanairana ny saina momba ny tantara ratsy nataon'i Hypo-Alpe Adria tamin'ny taon-dasa dia 1,7 ary ny fitsapan-kevi-bahoaka 2011 momba ny hetsika fanabeazana amin'ny 4,5 dia XNUMX isan-jato. Saingy tsy mahagaga izany satria ny fandraisana anjara politika an-tserasera ihany koa dia faritany vaovao ho an'ny demokrasia tandrefana.
Na izany aza, ny e-demokrasia dia nolavin'ny ankabeazan'ny mponina fotsiny.
"Ny fanitarana ny fifandraisan'ny olom-pirenena amin'ny sehatra nomerika dia tsy fahatsapan-tena manohitra ny faharatsiana ara-politika."
Daniel Roleff, mpahay siansa politika
Araka ny fanadihadiana nataon'ny SORA Institute for Social Research and Consulting dia mbola teo amin'ny fahazazany tany Aotrisy ny e-demokrasia sy ny fandraisana anjara. "Ny fifidianana nomerika dia mitsikitsiky ihany: ny manam-pahaizana sy ny maro an'isa ao amin'ny mponina dia miantso ny tsy fisian'ny fangaraharana sy ny fanodikodinam-bola ho filoham-pirenena lehibe indrindra", hoy ny fandinihana nataon'i Mag. Paul Ringler. Na any Alemana aza dia tsy mitovy ny fandanjalanjana ny zom-pirenena. 2013 dia nanontany ny Bertelsmann Foundation tamin'ny alàlan'ny telefaona olom-pirenena 2.700 sy mpanapa-kevitra 680 avy amin'ny kaominina tsirairay ho an'ny fidirany handray anjara. Vokatr'izany, ny 43 isan-jaton'ny mpamaly dia nandà ny fandraisana anjara an-tserasera, ka ny 33 isan-jato ihany no maka azy. Raha ampitahaina: ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana filankevitra monisipaly dia nahatratra tsara 82 isan-jato ary ny 5 isan-jato ihany no nandà azy ireo. Ny fehin-kevitry ny Bertelsmann Foundation: "Na dia mihena aza ny tahan'ny tanora, ny endrika vaovao amin'ny fandraisana anjaran'ny tamba-jotra dia mbola manana laza ratsy ihany ary mbola tsy nametraka ny tenany ho fitaovana eken'ny fandraisana anjara demokratika."
Ny famaranana ny fandalinana ny SORA dia izao: ny revolisiona amin'ny Internet dia tsy mamporisika ny tombotsoan'ny politika ankalalahany, fa manamora ny olona liana ara-politika hampahafantatra sy handray anjara. "Ity fanombanana ity dia zarain'ny mpahay siansa ara-politika alemana Daniel Roleff, ohatra: "Ny fanitarana ny fifandraisan'ny olom-pirenena amin'ny sehatra nomerika dia tsy fahatsapan-tena manohitra ny faharatsiana ara-politika."
Demaokrasia amin'ny alikaola - Mankaiza ny dia?
Manoloana ny fitohizan'ity tranga ity dia mahita i Peter Parycek, filohan'ny vondrona tetikasa E-Demokrasia ao amin'ny Danube University Krems, ny mety ho fivoaran'ny demokrasia lehibe indrindra amin'ny endrika fiaraha-miasa vaovao eo amin'ny samy olom-pirenena sy ny sehatry ny daholobe. Izy no manondro ny tetikasa fandraisana anjara amin'izao fotoana izao Digital Agenda ao amin'ny renivola federaly. Ny olom-pirenena dia asaina hanampy amin'ny famolavolana paikady nomerika ho an'i Vienna. "Ny zava-dehibe dia misy ary misy ny fifanakalozan-dresaka virtoaly sy tena fifampiresahana eo amin'ny mpitantana sy ny olom-pirenena," hoy i Parycek. "Ny rindrambaiko Liquid Democracy dia manome fahafahana manentana hanangona hevitra sy hikarakara ny fanavaozana misokatra malalaka", hoy i Parycek.
Mba hamerenana ny fahatokisan'ny olom-pirenena amin'ny politika dia mino izy fa zavatra iray hafa mihoatra noho ny zavatra rehetra ilaina: mangarahara bebe kokoa eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny politika. "Ny fanerena amin'ireo antoko politika ho tonga mangarahara dia mihamitombo. Na ho ela na ho aingana dia hanokatra izy ireo », hoy i Parycek. Raha ny marina, ny antoko politika dia tsy afaka mandà ny fangaraharana intsony sy ny demaokrasia ao anatiny, satria efa mihetsika ny fototry ny antoko lehibe miorina ary mihamafy ny antso ho an'ny fiaraha-miasa bebe kokoa. Ny demaokrasia misimisy dia mety tsy hanova ny modely maha-demôkrasia antsika, fa maneho izany fomba ahafahan'ny fandraisana anjara sy ny mangarahara izany.
Previous article Trano azo trandrahana: inona ny trano fonenana ara-tsosialy?
Lahatsoratra manaraka Jiro maitso sy fanovana madio